कसरी बग काट्ने रोक्न। र बग काटने राहत फेला पार्नुहोस् - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर चेकआउट औषधि जानकारी समाचार, कल्याण मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार कम्पनी, समाचार प्रेस कल्याण कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> गर्मी को काट्न र डंक कसरी व्यवहार गर्ने
गर्मी को काट्न र डंक कसरी व्यवहार गर्ने
ग्रीष्म typicallyतुको मतलब सामान्यतया धेरै रमाइलो समयहरू बाहिरै बिताइन्छ - तर ग्रीष्म alwaysतुमा घाम र वर्षाको हुँदैन, यो कीराको डंक र टोकेसमेत आउँदछ। दुर्भाग्यवस, रमाइलो पिकनिकहरू प्राय: मौरी, आगो कमिला वा लामखुट्टेले दुर्घटनाग्रस्त हुन्छन्। जबकि धेरै जसो समय काट्नु र डings्ग्स मात्र उपद्रव हुन्छ, ती खतरनाक हुन सक्छ।
केहिमा, बग काट्नु गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रियालाई ट्रिगर गर्न सक्दछ, चक्कर, गला बन्द, सूजन, र / वा शरीर को खुजली फैलाउने, लिली बार्क्सी , MD, लस एन्जलसको एक जरुरी देखभाल चिकित्सक। यदि तपाईं यी लक्षणहरू मध्ये कुनै पनि अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आपतकालीन कोठामा जानु पर्छ।
अन्य सबै काटनेको लागि, तपाईं घरमा उपचार गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ - तर यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं के साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ।
साधारण बग टोको र तिनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने
यस्तो हुन सक्छ कि तपाईलाई आफ्नो इलाकामा सँधै संदिग्ध व्यक्तिहरू थाहा छ, जस्तै लामखुट्टे वा रातो कमिला, तर यदि तपाईं कतै नयाँ हुनुहुन्छ भने, के हेर्नु राम्रो हुन्छ जान्नु राम्रो हुन्छ। यहाँ, ग्रीष्म commonतुका आलोचकहरू, कसरी तपाईंलाई काट्नबाट रोक्नको निम्ति, र यदि तपाईंलाई चुप्प लाग्छ भने स्टिंगको उपचार गर्ने बारेमा जान्नुहोस्।
बग काट्ने पहिचान
काटनेको प्रकार लक्षण के यसलाई चिकित्सा उपचार चाहिन्छ? उपचार
माहुरी र भेंडा तत्काल दुखाई, रातो र / वा सूजन, खुजली होइन, जबसम्म तपाईंसँग एलर्जी प्रतिक्रिया हुँदैन। एन्टीहिस्टामाइन क्रिमहरू वा एलर्जी प्रतिक्रिया बेनाड्रिल वा एउटा इंजेक्शनको लागि एपिनेफ्रिन
लामखुट्टे सानो रातो बम्प, साइटमा खुजली, सूजन हैन Anti-itch creams वा सुखदायक मलहमहरू जस्तै घ्यु कुमारी
आगो कमिला जलेको अनुभूति, सेतो छाला, तत्काल दुखाइ, धेरै दिनसम्म चल्ने खुजली होइन, जबसम्म तपाईं एलर्जी प्रतिक्रियाको संकेतहरू देखाउनुहुन्न Hydrocortisone मलाई
टिकहरू हल्का जलन वा टिक-जनित बिरामीहरूको लागि: ज्वरो, चिसो, टाउको दुख्ने वा घाँटी कडाई, मांसपेशि वा जोड़हरूको दुखाइ, विशिष्ट दाग होईन, जबसम्म तपाई टिक-जनित रोगको शंका गर्नुहुन्न साबुन र पानीले क्षेत्र धुने
फ्ल्यास क्लस्टरहरू, खुजली वा घाउमा साना रातो बाईटहरू पाइन्छ, बगल, टाउको, घुँडा, र छालाको वरिपरि टोक्छ हैन Anti-itch cream Like बेनाड्रिल खुजली रोकिदै क्रीम
माकुरा दुखाई, खुजली, वा साइटमा दाग, बैजनी वा रातो रंगको छाला, ज्वरो वा चिसो, मांसपेशी दुख्ने र क्रिम्पिंग, टाउको दुखाइ, मतली वा बान्ता, पसिना, र / वा सास फेर्न कठिनाई चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस् यदि तपाईंलाई शंका लाग्छ यो विषाक्त माकुराको टोका हो साबुन र पानीले काटेको सफा गर्नुहोस् र एन्टिबायोटिक मलम लागू गर्नुहोस्; एक बरफ प्याक वा शीत नम कपडा पीडा र सूजन कम गर्न
Chiggers क्लस्टरमा टोक्ने, गहन खुजली, रातो, उब्रे छाला, घारमा जस्तो दाग हैन तुरुन्त साबुन र पानीले धुनुहोस्; anti-itch मलाई
माहुरी र भेंडा
केवल पहिचान राख्नको लागि, माहुरीहरू फ्युरे हुन्छन् र थोरै छैनन्। केहि अधिक सामान्य कुतुर प्रजातिहरु मा पहेलो ज्याकेट र हॉर्नेट समावेश छ। येलोजेकेटहरूले भूमिगत गुँड बनाउँदछ जबकि हर्नेट्स कागजजस्ता गुँडमा फेला पार्न सकिन्छ जुन रूखहरूसँग जोडिएको छ।
यी उडानहरू बीच सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको माहुरीमा एक पटक मात्र डंक हुन्छ (र उनीहरूको स्टिंगरलाई त्यहीं छोड्नेछ जहाँ उनीहरू छाडेका थिए) र बारम्बार धेरै चोटि टाँसिन सक्छन्। एउटा भेंडा वा माहुरीको टाँस पछाडि तपाईं एक स्थानीय वा एलर्जी प्रतिक्रिया सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
एक स्थानीय प्रतिक्रिया तत्काल दुखाई, लालिमा, ड the्गको साइटमा सूजन, र स्टिंग साइट वरिपरि खुजली को लक्षणहरू समावेश गर्दछ। एक स्थानीय प्रतिक्रिया को लागी उपचार को लागी सामान्यतया मात्र सफा, र सम्भवतः एन्टीहिस्टामाइन वा एन्टी - खुजली क्रीम को लागी खुजली, रातो र सूजन को लागी सहयोग गर्नु पर्छ। उपचार गर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाइँ मौरीको मौरी हुनुहुन्छ भने स्टिंगर तपाईंको छालाबाट हटाइएको छ।
एक एलर्जी प्रतिक्रिया सास फेर्न कठिनाई, रातो खुजली चकत्ते दाग बाहिरको क्षेत्रहरूमा फैलिएको, अनुहार र घाँटीको क्षेत्र को सूजन, चिन्ता, द्रुत नाडी, र चक्कर आउँछ। एलर्जी प्रतिक्रियाको उपचार गर्न, तपाईले Benadryl लिन सक्नुहुनेछ वा गम्भीरताका आधारमा एपिनेफ्रिनको एक इन्जेक्शन लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग एलर्जीको आक्रमणको समयमा EpiPen छैन भने, तुरुन्तै आपतकालीन चिकित्सा सहायता लिनुहोस्।
रमाईलो तथ्य: केवल महिला लामखुट्टाहरूले टोक्छ, र तिनीहरूलाई गर्मीमा रोक्न गाह्रो हुन सक्छ। लामखुट्टेले कत्तिको काट्ने गर्छ किनभने जब लाम छालामा छिर्छ, हाम्रो शरीरले यसलाई एक विदेशी पदार्थको रूपमा मान्यता दिन्छ जुन हिस्टामाइन प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्दछ जसले खुजलीमा निम्त्याउँछ। यो कष्टप्रद हुन सक्छ, जबकि एक लामखुट्टेको काटने पर्याप्त हानिरहित छ, भन्छन् निकेत सोनपाल , एमडी, न्यूयोर्क आधारित ईन्टर्निस्ट र टौरो कलेजमा सहायक प्रोफेसर। तपाईले टोक्नुबाट एक सानो रातो बम्प देख्नुहुनेछ, साइटमा खुजली, र क्षेत्र वरिपरि सूजन। केवल प्रभावित क्षेत्र सफा राख्नुहोस्, र एन्टी-ईच क्रीम वा एन्टिबायोटिक मलमको साथ, डा सोनापल भन्छन्। तपाईं पनि एलोवेरा वा डिफेनहाइड्रामाइन सामयिक क्रीम जस्तो कि सुखदायक मलहम को प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ लामखुट्टेको काट्न राहतको लागि।
सम्बन्धित: विदेशमा यात्रा गर्दा मलेरिया कसरी रोक्न सकिन्छ
मेलाटोनिन को अधिकतम मात्रा म लिन सक्छु
फायर कमिलाहरू रातो वा कालो हुन सक्छन् र भवनको भित्ता वा नरम माटोको टीका भित्र भेट्टाइन्छ। तर सावधान यदि तपाइँ तिनीहरूलाई फेला पार्नुभयो! फाँटीको गुँडमा गडबडी गर्नाले सम्भवतः कीराहरूले आक्रमणकारी झुण्डमा बदला लिनेछ।
फायर कमिलाको टोकाइका लक्षणहरू:
एक जलिरहेको सनसनी
छालामा सेतो छाला
धेरै दिनसम्म चल्ने खुजली
तपाईं आगो कमिलाको टोकोको उपचार घरेलु उपचार वा औषधिहरूको साथ गर्न सक्नुहुन्छ जुन खुजलीमा मद्दत गर्दछ, जस्तै हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम। केही मानिसहरूलाई आगोमा कमिलाहरूमा एलर्जी प्रतिक्रिया हुन्छ।डाक्टर सोनपाल बताउँदछन् कि यदि तपाईलाई चक्कर आउँछ [वा] असहनीय पीडा वा सास फेर्न गाह्रो लाग्छ भने मेडिकल सहायता लिन पर्छ।
सामान्यतया बाहिर वा बाहिर जनावरहरू भेट्टाइन्छ, टिकहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामान्य छन्। टोकोले अधिक गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्छ यदि टिकaको वाहक हो विभिन्न प्रकारका रोगहरू स्थानमा निर्भर गर्दै। यी सर्तहरू सामेल छन् लाइम रोग , दक्षिणी टिक-सम्बन्धित दाग बिमारी (STARI), रॉकी माउन्टेन दाग बुखार (RMSF), ehrlichiosis, र tularemia। लाइम रोग ब्याक्टेरियमको मामिलामा, टिक्स प्रसारण हुनुभन्दा अघि -4 36-88 घण्टा वा सोभन्दा बढी जोडिएको हुनुपर्दछ - त्यसैले यो नै टिकको टोकोको तत्काल उपचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। To टिक हटाउनुहोस् , चिमटी प्रयोग गर्नुहोस् र माथिका मोशनमा तान्नुहोस्।
रातो दाग, घाउ, वा सानो सूज सहित टिकको काटनेका लक्षणहरू सामान्यतया न्यून हुन्छन्। टिक-जनित रोगका लक्षणहरू अधिक गम्भीर हुन्छन् र समावेश हुन सक्छन्:
टाउको दुखाई वा घाँटी कठोरता
मांसपेशी वा जोड्ने दर्द
यदि तपाइँ टिक-जनित रोगको कुनै पनि लक्षण विकसित गर्नुहुन्छ भने, चिकित्सा सहयोग लिन महत्वपूर्ण छ।
सम्बन्धित: कसरी टिक्ट काट्ने बाट बच्न
फ्लाईहरू पाल्तु जनावरहरूका मालिकहरूको लागि एक बर्ष समस्या हो, तर तिनीहरूले गर्मीमा अझ ठूलो समस्या निम्त्याउँछन् किनकि गर्मी महिनाहरूमा तिनीहरूको प्रजनन चक्र छिटो हुन्छ। फ्लाई इन्फेस्टेशनहरू हुन सक्दछ जब फ्ल्यास् कार्पेट वा यार्डमा बस्दछन्, कहिलेकाँही घरपालुवा जनावर बिना पनि। फ्ल्यास वरिपरि उफ्रन्छ र घरपालुवा जनावर र मानवको लागि एक उपद्रव हो।
एक फ्लाई काट्ने को लक्षणहरु:
कम खुराक जन्म नियन्त्रण गोलियाँ साइड इफेक्ट
क्लस्टरहरूमा सानो, रातो काटियो
टोकेको वरिपरि रातो सानो रिंग
काटनेहरू प्राय: जसो बगल, पायल, घुँडा र छालाको वरिपरि देखा पर्दछ
खुजली छाला जो घाउ वा पीडादायी हुन सक्छ
बेन्डा्रिल खुजली रोक्ने क्रीम जस्ता एन्टी-ईन्च क्रीमहरूले काटनेसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको खुजली कम गर्न मद्दत गर्दछ। फ्लाई काट्नु नत्र महत्वपूर्ण छ किनकी यसले काण्ड संक्रमित हुने सम्भावना बढाउँदछ।
काटेको छेउछाउको संक्रमणबाट बच्न डा। सोनपाल भन्छन् कि साइट सफा गर्नुहोस् र एन्टिबायोटिक मलमले टोकेपछि कभर गर्नुहोस्।
माकुरो अर्को आलोचक हो जुन गर्मी महिनाहरूमा प्राय: देखा पर्दछ। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेला परेका अधिकांश माकुराहरू विषाक्त हुँदैनन्, उनीहरू अझै पनि पीडादायी काट्न छाड्न सक्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेर्नका लागि दुई विषालु मकुराहरू खैरो रlu्ग र कालो विधवा हुन्।
माकुरोको टोकोको लक्षण माकुरोको प्रकारको बिच फरक हुन्छ, तर समावेश हुन सक्छ:
दुखाई, खुजली, वा साइटमा दाग
साइटमा बैजनी वा रातो रंगको छाला
ज्वरो वा चिसो
मांसपेशी दुखाइ र क्रम्पिंग
गैर-विषाक्त माकुराको टोकाइको लागि उपचार साबुन र पानीले क्षेत्र सफा गर्ने, क्षेत्रलाई माथि उठाउने, र दुखाइ र सूजन कम गर्न आइस प्याक वा एक चिसो, नम कपडा प्रयोग गर्नु हो। यदि खुजली छ भने, क्रीम प्रयोग गर्नुहोस् वा एक antihistamine जस्तै Benadryl लिनुहोस्। यदि काटिएको सुधार हुँदैन र यो फुल्न थाल्छ भने, चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
चिगर्स, वा वैज्ञानिक हिसाबले ट्रोम्बिकुलिड माइट्स एराकिनिड परिवारका धेरै साना आलोचकहरू हुन् जुन घाँसे क्षेत्रमा बस्थे। सामान्यतया, चग्गाको टोको तल्लो शरीरमा हुन्छ जहाँ कपडा हिट हुन्छ, जस्तै खुट्टामा जस्तै जब मोजा लगाउँदा वा प्यान्टको कमरपट्टी वरिपरि।
Chigger काटने का लक्षणहरु मा समावेश छ:
रातो, उब्रेको छाला
घारमा जस्तै दाग
Chigger काटने एक वा दुई हप्ता पछि निको हुनेछ, तर तपाईं anti-itch क्रीम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पुरुषहरू को तालमा द in्ग छन् भने, तिनीहरू ग्रीष्मकालीन Penile सिन्ड्रोम प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले पेशाब गर्न कठिनाई उत्पन्न गर्दछ, तर केही हप्ता पछि पछि कम हुनेछ।
बग काटने राहतको लागि home घरेलु उपचार
धेरै बग काट्नेहरू घरमै उपचार गर्न सकिन्छ किनकि उपचार प्रायः खुजली वा सूजन कम गर्न मद्दतको लागि हो। यहाँ प्रयास गर्न केहि तरिकाहरू छन्:
आइस प्याक वा बरफ , चिसो कम्प्रेसको रूपमा प्रयोग गरिएको, बग काटनेको सूजन र सूजन घटाउन मद्दत गर्दछ।
घ्यु कुमारी एक बोटबाट वा औषधि पसलमा किनिएको — बग काटनेको लागि लागू गर्दा खुसी र जलन कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मह , यसले छालालाई शान्त नगर्न सक्छ, मद्दत गर्दछ सूजन कम र खाडीमा संक्रमण राख्न मद्दत गर्दछ।
दलिया विरोधी भड़काउने गुणहरू छ र कम देखाइएको छ जलन र खुजली । यसलाई पानीको साथ टाँस्नुहोस् वा ओटमील नुहाउने कोशिस गर्नुहोस् खुजली बग काटनेसँग लड्न।
भिनेगर छ विरोधी सective्क्रमित गुणहरू। यदि तपाईं सम्भावित संक्रमणको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईं कपासको बलले काटेको केही स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तर दिमागमा राख्नुहोस् यो सम्भवतः जलाउनेछ।
क्यालामिन लोशन छाला शान्त गर्न र खुजली राहत प्रदान गर्न सक्छ। तिमी सक्छौ यसलाई फार्मेसीमा काउन्टरमा खरीद गर्नुहोस् वा एक DIY रेसिपी अनलाइन फेला पार्नुहोस् बेकिंग सोडा पेस्टको प्रयोग गरेर घरेलु संस्करण बनाउनुहोस्।
आवश्यक तेलहरूसक्छ बग काट्न शान्त साथै। चिया रूखको तेल र लेमनग्रास तेलले सफा गर्न र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। ल्याभेन्डरले पीडा कम गर्न सक्छ र तुलसी आवश्यक तेल संक्रमण रोक्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, पेपरमिंट र मेन्थोल तेल लात हान्नुहोस् र जलेको छ र छ एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरू यसले संक्रमणको जोखिम कम गर्दछ, त्यसैले टुथपेस्ट बग काटनेको लागि लोकप्रिय घरेलु उपचार हो।
सबै बग काटनेको लागि, खाडीमा खुजली राख्न महत्त्वपूर्ण छ। डा। बार्स्की भन्छन्, कीराको टोकाइ / डंक अति संक्रमित हुन सक्छ, विशेष गरी अत्यधिक खुजली को लागी खरोंचको साथ। खोज्नको लागि संकेतहरू बढ्दो लालिमा वा मौलिक काँढाबाट फैलिने सूजन, घाउ र / वा ज्वरोबाट डिस्चार्ज समावेश गर्दछ।
यदि संक्रमण हुन्छ भने, यो तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकको भ्रमण गर्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईंलाई एन्टिबायोटिक आवश्यक पर्दछ।
कसरी बग काट्ने रोक्न
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईले बग्सको ध्यान बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ बिट वा स्टung्ग हुनु भन्दा पहिले। डेभिड सामदी ल Long्ग आइल्याण्डको सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालका एमडी, निम्न सुझावहरू सुझाव दिन्छन्:
बाहिर जानु भन्दा पहिले, सँधै कीरा विक्रेतामा हाल्नुहोस् जुन २०% देखि %०% DEET सम्ममा छाला र कपडामा हुन्छ। यसले अरू बगहरू लगायत लामखुट्टे र टिक्कहरू हटाउनेछ।
कुनै खुला क्षेत्र छाला कवच गरिनु पर्छ यदि वन क्षेत्र मा पैदल यात्रा को रात को बाहिर जान। लामो बाहिरी शर्ट, प्यान्ट, मोजा, ​​र बन्द पैतालाको जुत्ता (स्यान्डल छैन) तपाईंको छाला र बगहरू बीच एक अवरोध सिर्जना गर्दछ।
सेतो वा बेज रंगको लुगा लगाउन कोसिस गर्नुहोस् किनभने स्टिंगि insec कीराहरू चम्किलो रंगमा आकर्षित हुन्छन्।
कोलोन, परफ्यूम, वा कपाल स्प्रे लगाउनबाट जोगिनुहोस् — लामखुट्टेले सोच्दछन् कि तिमी फूल हौ र तिमीमा अवतरण चाहन्छौ।
एकचोटि तपाईं घर भित्र फर्कनुभयो भने, टिकट वा बग काट्ने संकेतहरूको लागि तपाईंको शरीर जाँच गर्नुहोस्; टिकटहरू तुरुन्तै हटाउनुहोस् र बग बाइट्सको आवश्यकको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्।
डा। समदी भन्छिन्, कि सामान्यतया चुरो लाग्ने कीराहरू तपाईं पछि मात्र जान्छ, डाक्टर समदी भन्छन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई स don्कष्ट गर्नुभएन भने, तिनीहरूले तपाईंलाई सताउँदैनन्।
यदि तपाईं सुताई बग काटनेको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, एउटा लामखुट्टेको जाल प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र एयर कन्डिशनर प्रयोग गर्नुहोस् किनकि धेरै बगहरूले चिसो मनपर्दैन।
यदि तपाईं यस गर्मीमा डस्नुभयो भने, विशेष गरी यदि तपाईंलाई एलर्जी छ भने, कम पर्खाइको साथ सहि नुस्खाहरू पाउनुहोस् एकलकेयरको बचत कार्ड ।
फार्मेसी स्टाफका लागि अन्तिम मिनेट हेलोवीन वेशभूषा
एफफेक्सोर बनाम जोलोफ्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
के एक मूत्राशय संक्रमण घर उपचार मा मद्दत गर्दछ
एक गर्भवती महिला कस्ता दुखाई बाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ?
मँ मधुमेह को निःशुल्क आपूर्ति कहाँ पाउन सक्छु?
एक महिना पछिbकाम योजना गर्न सक्नुहुन्छ
वयस्कों को लागी सामान्य शरीर को तापमान दायरा के हो